चीनमा ५७.७ प्रतिशत इन्टरनेट प्रयोगकर्ता
बेईजिङ . चीनमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको सङ्ख्या ५७.७ प्रतिशत पुगेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ । इन्टरनेट प्रयोग गर्नेमध्ये २६.३ प्रतिशत ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिक रहेको समाचारमा जनाइएको छ ।
चिनियाँ अनलाइन प्रयोगकर्ताहरूको सङ्ख्या ८० करोड २० लाख पुगेको सोमबार सार्वजनिक गरिएको चिनियाँ अनलाईन विकास विवरणमा उल्लेख छ । गत जुन महिनाको अन्त्यसम्मको यो तथ्याङ्कमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको सङ्ख्या छ महिना अगाडीको भन्दा ३.८ प्रतिशत बढेको देखिएको छ ।
चीनमा कुल ७८ करोड ८० लाख नागरिकले मोवाइलमा इन्टरनेट प्रयोग गर्दछन् । इन्टरनेट प्रयोग गर्नेमध्ये मोवाईलमै इन्टरनेट प्रयोग गर्नेहरूको सङ्ख्या ९८.३ प्रतिशत भएको चाइना इन्टरनेट नेटवर्क इन्फर्ममेसन सेन्टरले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले पोलको भाडा बढाएकोमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघको आपत्ति
काठमाडौँ । नेपाल बिधुत प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनिहरुलाई प्रयोग गर्न दिईरहेको पोलहरुको भाडादरमा अस्वाभाविक बढाएको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले आपत्ति जनाएको छ । प्राधिकरणले अस्वाभाविक रुपमा यसै आर्थिकबर्षदेखि लागु
संसारमा ५जी इन्टरनेटको चर्चा चल्दै गर्दा ६जी रिसर्चमा चिनियाँ विज्ञहरु !
काठमाडौं । प्रविधिमा फड्को मार्दै गरेको विश्वमा ५जी इन्टरनेट कसरी विस्तार गर्ने र कसरी द्रुतगतिमा इन्टरनेट चलाउने भनी विश्व अहिले यसको खोजीमा जुटिरहेको छ । ३जी, ४जीको सफलतासँगै ५जीलाई व्यवसायीकरण
साल्ट लेक सिटी, अमेरिका / अमेरिकाको उटाह विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत एक छात्रालाई गोली हानी हत्या गरेका एक व्यभिचारी व्यक्तिको विगतका निजी विवरणहरुको खुलासाले सबैलाई आश्चर्यमा पारेको छ । यौन शोषणका लागि महिलालाई
दार्चुलामा वायरलेस इन्टरनेट
दार्चुला । दुहूँ गाउँपलिकामा वायरलेससहितको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइएको छ । गाउँपालिकाले चालू आवको बजेटमा गाउँपालिका, वडा तथा विषयगत कार्यालयमा इन्टरनेट जडानका लागि रकम छुट्याएको थियो । गाउँपालिकाको नियमित कामकाजमा सहज